Home Wararka Senatar-kii u horeeyay oo laga soo doortay Dowlad Goboleedka Jubbaland
Senatar-kii u horeeyay oo laga soo doortay Dowlad Goboleedka Jubbaland
Ilyaas Badal Gaboose, ayaa noqday Senatorkii ugu horeeyay ee ka soo baxay doorashada Soomaaliya ee 2021 sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashadda heer Dowlad-goboleed ee Jubbaland. Gaboose, oo helay 55 cod ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay UH0033, oo uu kala tartamay Maxamed Axmed Sayid.
Maxamed Axmed Siyid ayaa helay 17 cod.
Gaboose, ayaa horay guddoomiye uga soo noqday gobolka Jubbada hoose. Isaga oo uga mahadceliyay Baarlamaanka in ay xilkaasi u doorteen, waxa uu sheegay in uu ka shaqayn doono wadajirka dowladda Faderaalka iyo Dowlad-goboleedka Jubbaland.